volombakoka volondrafitra "perla graponey" - Moi Mili
Home > velvet shell cushion "perla grafit"
velvet shell cushion "perla grafit"
Ny ondana vita amin'ny volon'akelin'i Moi Mili no tolo-kevitray handravaka ny tranonao. Izy ireo dia fanampiny tany am-boalohany ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, haingon-trano fandriana na seza rattan. Ny ondana dia amboarina ary vita amin'ny lamba volondana avo lenta amin'ny loko grika, dia mianjera amin'ny volomparasy izy io. Ny lamba marevaka dia hampiditra rivo-piainana mahafinaritra ao anatiny, ho tsara tarehy ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny tsara tarehy. Mamporisika anao izahay hamorona andian-ondana maromaro, toa majika izany.